11 may teo tokony tamin’ny 5 ora sasany maraina rehefa avy nanendaka tovovavy iray avy niala tamin’ny bus avy any ambohitrimanjaka teo amin’ny tobim-piantsonan’ny taxibe 172 akaikin’ny HAVANA. Maromaro ireo mpanendaka tamin’izany ka lasan-dry zareo ny poketran’ilay tovovavy izay nisy vola mitentina 1.500.000Ariary sy finday iray ary fanalahidy maromaro. Polisy nanao ny asany teny an-toerana no nitarainan’ity niharam-boina ka nanampy azy nisambotra ity mpanendaka ity. Tsy tratra teny amin’ity farany intsony moa ireo entana azony ireo. Tamin’ny fanadihadiana dia nilaza ilay tovovavy fa ity lehilahy ity mihitsy no nanendaka azy. Natolotra ny fampanoavana omaly ny lehilahy.